Maitiro Ekugadzira Candy Mabhokisi NeCrepe Pepa Kune Mapato Uye Mhemberero | Mhizha On
Maitiro ekugadzira zvihwitsi mabhokisi ane crepe mapepa emapati nemhemberero
Irene Gil | | Crafts, Mapepa emhizha, Crafts uye zvinhu, Kudzokorora
Mune izvi Tutorial Ini ndinokudzidzisa iwe kuti uite zvimwe zvihwitsi o zvihwitsi mabhokisi nyore kwazvo uye isingadhuri. Ivo vadiki vanogona kutibatsira kuti tiite kuti vatore chikamu mukujekeswa kwemashoko avo Birthday Party o Chirairo. Tichave tichiitawo kuti vazive nezve kukosha kwe dzokazve sezvo isu tichizoshandisa zvakare zvigadzirwa kugadzira iwo maswiti mabhokisi.
Kuita iyo zvihwitsi o zvihwitsi mabhokisi iwe unozoda zvinotevera zvinhu:
Kadhibhodhi chubhu repepa rekuchimbuzi kana pepa rekicheni
Inonamira yakadai sesilicone, chena gundi kana kunamira
Crepe bepa remuvara iwe waunoda ako maswiti
Yakadhindwa bepa ine iwo maitiro aunofarira zvakanyanya
Kutanga kuita iyo confectioner tora iyo kadhibhodhi chubhun. Kana iri bepa repepa tauro, richeke kune saizi iwe yaunoda kuti irege kutora nguva refu. Iwe unofanirwawo kucheka chidimbu che pepa rekunyora yakakura kudarika kadhibhodhi chubhu, ichibuda kubva pamacheto maviri mashoma mana kana mashanu masendimita.
Namira bepa repepa rakakomberedza kadhibhodhi chubhu, uchiifukidza zvachose uye uchisiya chubhu iri pakati. Kufunga nezve kuti aya anotapira mabhokisi akagadzirirwa kupa sezvipo mu pati o mhemberero kune vaenzi, zvinokwanisika kuti isu tichafanirwa kuita huwandu hwakawanda hwavo, saka chinhu chakanyanya kugadzikana kunamatira bepa inopisa silicone, sezvo inonamatira ipapo, nenzira iyi tinenge tichichengetedza yakawanda nguva. Zvisinei, kana uchida ivo vana kukubatsira iwe mukuita uye iwe unosarudza kushandisa imwe yekunamatira iyo yavasingakwanise kupisa, unogona kushandisa chena glue kana kunamatira tsvimbo.
Pinda iyo zvihwitsi, zviwitsi, machokoreti kana chero chinotapira usati wavhara, uye kana iwe uchinge uinacho mukati, tendeuka magumo epa crepe bepa worimonera, uchirisiya sekunge raive kutenderera zviwitsi. Kutenda kune hunhu hwepepa rino, hauzove nedambudziko nekuvhura, nekuti ichapetwa sezvaunenge uchiisiya.
Kuti uishongedze zvishoma, cheka mutsara we mapepa akanyorwa ane mumvuri uye mapatani anoenderana nemuvara wechihwitsi chihombe chawakangogadzira. Namira pakati peiyo yekunamira neinonamira uye unenge wapedza rako bhokisi remawidi. Yakakwana ye mabiko ekuzvarwa, chirairo, mucheche shawa… Iite nemavara aunoda, nekuti pepa repepa rinogona kuwanikwa mune dzakasiyana dzakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts uye zvinhu » Maitiro ekugadzira zvihwitsi mabhokisi ane crepe mapepa emapati nemhemberero
Superhero Mabhukumaki ane Matanda Emiti
Penzura mubati wevana vakagadzirwa nevha kana fomy rubber